के थियो क्याप्टेन एजी शेर्पाले गरेको खराब समयमा सहि निर्णय ? – Kavrepati
Home / समाचार / के थियो क्याप्टेन एजी शेर्पाले गरेको खराब समयमा सहि निर्णय ?
admin September 28, 2021	समाचार Leaveacomment 86 Views
बुद्ध एयरको एनआई कल साइनको उडान नम्बर–७०१ को विमानमा सवार ७३ यात्रुमध्ये २ जना बालबालिका र ३ जना नवजात शिशु थिए । ४ जना क्रु मेम्बर जहाजमा सवार थिए ।विमानको पाङ्ग्रा नै ननिस्किएपछि अब कसरी अवतरण गर्ने ? विमानस्थलमा हल्लीखल्ली मच्चिइसकेको थियो । कसरी फोर्स ल्यान्डिङ गराउने होला भन्ने चिन्ता एकाएक बढेको थियो ।
विमानस्थलमा दमकल र एम्बुलेन्स तैनाथ गर्न थालिएको थियो ।ल्यान्डिङ गियरमा संकेत नदेखेपछि विमानका क्याप्टेन एजी शेर्पाले विमान काठमाडौं फर्काउने निधो गरेका थिए ।विराट नगर विमानस्थलमा फोर्स ल्याण्डिङका लागि आवश्यक तयारी नभएको हुनाले विमान काठमाडौं फर्काइएको थियो । विमान बिहान ८ बजेर ३२ मिनेटमा विराटनगरका लागि उडेको थियो ।
विराटनगर एयरपोर्टमा ल्यान्डिङका क्रममा जहाजको गियरमा समस्या आएपछि पुन काठमाडौं फर्काइएको थियो। विमानमा समस्या आएको थाहा पाएपछि यात्रुहरु डराएका थिए । जहाज काठमाडौं फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाइ अलर्ट गरिएको थियो। भिडियो
Previous एकपटक त कोसीमै लगेर प्लेन ……..